सरकारी कार्यालयको कोठा भित्र पस्दा जुत्ता खोल्ने कि नखोल्ने ? - BirtaJyoti
super userSeptember 7, 2020 1:55 pm 1
सेवाग्राहीले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयको कोठा भित्र पस्दा जुत्ता खोल्ने कि नखोल्ने ?
एकदिन म कामगर्ने कृषि विकास कार्यालयमा एकजना सेवाग्राही दशबज्ने बित्तिकै पसे । भर्खरै सरसफाई (भ्याकुम) बिसाएर बसेका कार्यालय सहयोगीले ती सेवाग्राहीको खुट्टामा नियाल्दै यो त भएन नि,,… दाइ जुत्ता बाहिर खोलेर भित्र आउनुस त ।
ती सेवाग्राही एकै बचनमा बाहिर गएर जुत्ता खोलेर भित्रपसे आफ्नो कामकुरा बेलिविस्तार लाउन थाले । मलाई आफ्नै कार्यालय सहयोगीको व्यवहार ठिक बेठिक छुट्टाउन निकै समय लाग्यो । सरसफाई, अनुशासन, अपरिहार्य कुरा त हुँदै हो तथापि, म आफु कामगर्ने कार्यालय भवन नयाँछ, कार्पेट बिच्छाईएको सफा र राम्रो छ ।
कार्पेट ओछ्याईको कार्यालय भित्र काम बिशेषले पस्ने सेवाग्राहीले जुत्तारचप्पल बाहिरै खोलेर पस्ने कि ? नखोली पस्ने ? भन्ने सवाल अहिले विभिन्न तहमा उठ्दै आएको छ । त्यसमा पनि कृषि विकाससँग सम्बन्धित निकायमा अनपेक्षित रुपमा यो बहस चलिरहेको छ ।
एकदिनको कुरा हो, हाम्रो मन्त्रालयका सिनियर अधिकृत अनुगमनको शिलशिलामा हाम्रो कार्यालयमा आउनु भयो । ढोकाबाट भित्रपस्ने समयमा बाहिर दर्जनौ जुत्ताचप्पल देख्नु भयो । उहाले कृषि कार्षालयमा यो जुत्ताखोलेर भित्र पस्ने चलन राम्रो हैन । चाँडै करेक्सन गर्नुहोला भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।
कृषि व्यवसायमा कहिलेकाँही वाली विरुवामा रोगकीराको संक्रमण देखिनसक्छ । माटो र झार सहितको फोहोर मिश्रित वालीका नमुना अवशेष बोकेर किसानहरु बिशेषज्ञ अधिकृतकहाँ सल्लाह सुझावको लागि सोझै सम्पर्कमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी सेवाग्राही आउँदा र सेवाग्राहीले ल्याउने नमुना सामाग्रीले पनि सामान्य फोहोर त कार्यालय भित्र प्रवेश गर्ने त भैहाल्यो । तर, विगतमा कृषि पेशा एवं व्यवसाय नेपालमा अलि हेपिएको पेशा व्यवसायमा पर्दै आएको कुरामा कसैको दुईमत छैन ।
एउटा किसान भन्ने बित्तिकै फाटेको टोपी लगाएको, कट्टु लगाएको, काँधमा हलोजुवा बोकेको तस्विरलाई ठुल्ठुला पोष्टर बनाईयो । बिद्यालयका तमाम पाठ्यक्रममा त्यस्तै प्रकृतिका फोटो बनाएर कुरुप तरिकाले मिसाईयो ।
किसान भनेको अलि गरिव, जुत्रे,अनि निरीह हो भन्ने चित्र सहित आम उपभोक्ता पाठकहरुलाई पढाईयो । त्यसैको फलस्वरुप आज युवायुवतीको निकै लामो लस्कर विदेश पलायनहुन विवश छन ।
कारण कृषि पेशा व्यवसाय सम्मानित हुन सकेन । कृषिकर्म गर्नेहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक सरह बुझाउने बिम्वहरु तयार पारियो । तर, विकशित मुलुकमा सबै भन्दाबढि उत्पादक अर्थात किसानको सम्मान अन्य नागरिकको भन्दा बढि गरिन्छ ।
मुलुकमा भौतिक विकासको गतिसँगै निर्माण सुधारका प्रयासहरु हुँदै गएकाछन । विगत केही दशकदेखि नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयका नयाँ भवनहरु निर्माण भएकाछन । नयाँ भवनमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म सोही अनुसारका पर्दा, कार्पेट र फर्निचर सामाग्रीहरु लगाउनेरसजाउने कुरा भैहाल्यो ।
कृषि विकासका क्षेत्रमा कामगर्ने कार्यालय निकायहरु जो किसानको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका निकायहरुमा पनि भव्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक कामको शिलशिलामा कार्यालय भित्र प्रवेश गर्दा जुत्ता चप्पल खोलेर पस्ने वा लगाई लगाई पस्ने भन्ने विषय अहिले बहसको विषय भएको छ ।
प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका निकायहरुमा पनि भव्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक कामको शिलशिलामा कार्यालय भित्र प्रवेश गर्दा जुत्ता चप्पल खोलेर पस्ने वा लगाई लगाई पस्ने भन्ने विषय अहिले बहसको विषय भएको छ ।
उपल्लो दर्जाका अधिकांश विशेषज्ञको भनाईमा सफा कार्यालय भित्र पस्दा फोहोर मैला जुत्ता चप्पल सँगै भित्र्याइने भएकोले ढोका बाहिरै खोल्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
अर्कोथरीका मानिसको भनाईमा बाहिरै जुत्ताचप्पल खोलेर सफा अनि भव्यता सहितको कोठामा एक्कासीपस्दा किसान वा सर्वसाधारण जनताले आफुलाई लघुताभाष भएको, मनोबैज्ञानिक असर पर्नजाने र आफ्नो खास मागका साथै वास्तविक समस्याहरु कृषि विशेषज्ञ अधिकृतहरुलाई जानकरी गराउन सक्दैनन् ।
अर्थात मनको कुरा निर्धक्क सँग राख्न सक्दैनन् । त्यसैले जुत्ता र चप्पल खोल्न लाउनु हुँदैन ।
CATEGORIES Uncategorizedमेन स्टोरी
यस्तो छ निर्माणाधीन मेची पुलको अवस्था
भद्रपुर । पछिल्लो पटक निर्माण कार्य सुरु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि बहुप्रतिक्षित मेची पूल तरेर गलगलिया जाने भद्रपुरबासीको सपना साकार हुन सकेको ... Read More
NEWER POSTबेलैमा सचेत हौं
OLDER POSTसंचारकर्मीहरुका लागि कोरोना बिमाको रकम प्रदान